Izithako ze-11 ezibalulekile ku-Blog Ephoqayo Thumela | Martech Zone
Okunye okuqukethwe okuhle kakhulu ozokuthola kuwebhu kwenzeka lapho ukwazi ukuthatha inqubo eyinkimbinkimbi futhi ukwenze lula. ICopyrightblogger ukwenzile lokho nge lokhu infographic ekubhaleni okuthunyelwe kwebhulogi. Zonke izici zeseluleko ukucwenga nokupholisha okuthunyelwe ukuthola nokugcina abafundi. Kukhona ukhiye ngaphambi & ngemuva, futhi…
Ngaphambi - bhala ibhulogi yakho ku- ipulatifomu eyenziwe kahle lokho kujabulisa ngobuhle, kukhuthaza ukwabelana, futhi kunikeza ukubizelwa esenzweni kwabafundi ukuthi bazibandakanye ngokuqhubekayo (okubhaliselwe, ukulandwa, ubulungu, njll.).
Ngemva - khangisa okuthunyelwe kwakho kwebhulogi kuwo wonke amanethiwekhi wakho wezokuxhumana ukuze uthole abafundi abaningi futhi ukubandakanye ekumaketheni kwakho kwe-imeyili ukugcina lezo zivakashi zibuya!
Uma ungathanda ukufunda izindatshana ze-Copyblogger kusithako ngasinye se-11, nakhu ongaya khona:
Ubuciko a isihloko esikhulu kazibuthe.
Sebenzisa amagama athonyayo.
Bhala Damn imisho emihle.
Faka umbulali amaphuzu enhlamvu.
Dala izihlokwana ezijabulisayo.
Tshela oyengayo indaba.
Gcina ukunaka nge ama-cliffhanger angaphakathi.
Khetha i isithombe sokubopha.
Tags: ubuqinisoiposi blogamaphuzu enhlamvuikhophiisihlokoungabhala kanjani okuthunyelwe kwebhulogiukusetshenziswa kwesithombeizinto zohluIzinhluikhophi ekholisayoisihloko seposiukubhala izindabaizihlokwana
Jan 7, 2014 ngo-10: 57 PM
Siyabonga ngokufingqa ezansi kokuthunyelwe. I-infographic kunzima ukuyifunda